DAAWO: Mas’uuliyiin ka tirsan DF oo xiran Calanka Baluuga ah oo ka degay Hargeysa & & Qorshe cusub oo ay ku dhawaaqeen
August 11, 2018 marqaan Wararka Maanta 9
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi ay maanta gaadheen qaar kamid ah masuuliyiinta dowladda federalka Soomaaliya, kuwaas oo iyagu markii ay gaadheen magaalada Hargeysa ku dhawaaqay war aan farxad galin madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Masuuliyiintani ayaa qaarkood markii gaadheen magaalada Hargeysa waxa ay ku sheegeen Hargeysa in ay kamid tahay dhul Soomaaliyeed isla markaasna ay tahay caasimada labaad ee dalka Soomaaliya.
calankan buluuga ah yaa’iska lahaa? calankan towxiidka lehna yaa iska’leh? somaliya waa iney aqoonsataa khasab sandulle
ethiopia-Djipouti-kenya waxaa ka taagan calankaa tawxiidka leh OK maxaa idiin diidey inaad qaadataan towxiidka?
hadii aad aqoonsataan slnd towxiidka iyadaa ku gubanaysa laakiin dembi bey kugutey diidmada towxidku muslinbaanad ahayn
Maan fahmin waxaad soo qortay.
Calanka towxiidka lah dee Somaliland baa iska leh. Kolkaas ma waxaad leedahay siday xafiisyada amaba siday u taagan yihiin Safaaradaha Somaliland ku leedahay Jabuuti iyo Addisba uu calanku uga taagan yahay Muqdishina ha ogolaato oo sidaas oo kale ha u aqoonsato?
Mise wax kalaad ula jeeday oo wey iska kaa dhex gashay?
Towxiidka Somaliland iyadaa ku gubanaysa maxaad uga jeedaa?
Waar calanka snmta waa calaan kurdiyiintu leeh ee kaso amaheen kkkkk waax jiira maha.kkkk.
Kani miyaanu aheyn kii shaqada laga eryay cishadii dhoweyd?
Aw Shaaruboolahan waxaan xusuustaa isaga oo TV yada Soomaalida ee Ingiriiaka siiba London ka howl gala inta lasoo faadhisiyo la dooda kuwo Somaliland kasoo jeeda. Waxaa uu caan ku ahaa unuu doodihiisa daliilahooda uu waraaqo kusoo qorto amaba uu qoraalo hore oo lasoo saaray isaga oo soo xiganaya feyl dhan oo xaanshiyo ah miiska lasoo fadhiista.
Markaas ayay wax iskaga kala dhex yaaci jireen. Isaga oonan labo eray isku toosin ayay dooduba dhamaan jirtay. Waayo inta qofka kale la doodayo isagu xaanshiyaha ayuu ku mashquuli jiray. Kolkay isaga markiisa timaadona isaga oo gana gana leynaya xaanshiyihiisana welli baadhbaadhaya ayaa dooda laga bootin jiray.
Wallaahi waan u khajili jiray oo naftan yar maxay usoo cadibayaan ayaan odhan jiray. Waxa ugu darneyd markii lasoo fadhiisiyay TV af Ingiriisi ku baxa oo Weriye Madow uu daadihinayay. Ninkani waxa uu ku waashay oo uu soo dhaafi kari waayay ereyadan kooban. ‘The so called Somaliland’. Dhowr goor markuu kusoo hadal qabsaday ereyadan wax macno leh oo kalena ku dari waayay oo xitaa uu su’aalihii weriyaha inyarna dhahoo xitaa ka jawaabi kariwaayay ayaa weriyihii inta uu ku xanaaqay ku yidhi, “why do you keep on saying the so called Somaliland?” Yacni dheh wax kale oo macno leh. Isagoo sidiisii xaanshiyihii uu meesha la yimid faqaya ayaa laga jaray isaga oonan xitaa dhameysan dhowrkii midhidh ee loogu talo galay. Kkkk
Waar waanad dhiman uun. Gebigeygaba jidhiidhico ayaa tin iyo cidhib i saaqday. Anoo markiisii horeba aanan jecleyn ninkan ayaan maalintaas u diir naxay. Miskiina. Soomaalinimo ahaan ayaan ugu damqaday. Miskiina. Maalintaas ceeb weyn ayaa ka raacday meeshaas.
Ninkii aan liidnimadaas ku ogaa ayuun baan arkay isaga oo dawlada Xamar ka mid noqday. Markalaan naxay. Waar Dawladii Soomaaliyeed ee Muqdisho fadhiday ma kan oo kale ayay miciin biday mise isaga ayaa balaayo ka jini iskaga dhigay oo markay arkeen isagoo shaarubo weyn iyo xaanshiyo badan ku raran ayay kan wax baa ku duugan is yidhaahdeen? Miskiina. Wallee Dawladaas ayaanan meelnaba gaadhin ayaan niyada ka idhi. Waxaan qalbada ka sawirtay isaga oo qol dhan oo xaanshiyo ah dhexda u galay oo faqaya uun. Kolkaasaan hadana idhi malaha waxa wanaagsanaan laheyd in labtop yar iyo xabad tablet ama ipad ah uun loo dhiidho oo xaanshiyaha ninkan laga ilaaliyo. Malaha markaas ayaa inaba haday xigmadi ku duugan tahay ay kasoo bixi doontaaye.
Imikana hadii uu Airport ka Hargeysa isaga oo shacab ah oo transit ah uu sawir iskaga soo qaaday isaga oo shaadh buluug ah xidhan wax macno leh oo ay sheegeysaa ma jirto.
SHAAFICI cudurdaar 120xaraf ka'badan ma'qorikaro mobilkeygaa ah'tecno 9,5# ayaa.lasiiyaa mahadsanid FARSAMO YAQAAN41YEAR says:
slnd ama haku khasaarto ama haku faaiido towxiidka pland & xamareey qaado towxiidka anigu weligey tv man kadoodin
mala awaalka nagadaayo na baro waxaanu nahay 0634074674 isku kalsoonoow cabsida ilaahay uunbaa igu leh hadalbadan damer_
Adigu maka sawirka ku jira ayaad tahay? Kkk
Anigu ninka sawirka ku jira ee maqaalku ku socdo ayaan qoraalkeyga danbe wax kaga sheegay.
Sidaad u qoraal darantahay ayaad u famid darantahay. Kkkk